Raysal Wasaaraha Ingiriiska Oo Miiska Lugta Saaray Isaga Oo La Kulamaya Madaxweynaha Faraniiska Iyo Sababta + [ Sawiro ] – Ilays News
Raysal Wasaaraha Ingiriiska Oo Miiska Lugta Saaray Isaga Oo La Kulamaya Madaxweynaha Faraniiska Iyo Sababta + [ Sawiro ]
Waxaa baraha bulshada qabsaday oo aad loo falanqeeyay sawir muujinaya Ra’iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo cagta saaraya miis intii uu la kulmayay madaxweynaha Faransiiska oo ay Paris wadahadal ku yeesheen.
Balse dadka tilmaamay in ficilka Ra’iisulwasaaraha Britain uu ahaa mid aflagaado ah ayaa laga yaaba in ay degdegeen.
Muuqaalkan ayaa u muuqda Johnson oo ka jawaabaya kaftan uu ku yiri masuulkii uu martida u ahaa.
Emmanuel Macron ayaa u muuqda in uu tilmaamay in miiska u yaalla cagtana la saari karo, ka dibna Johnson ayaa cagtiisa midig kor u qaaday.
Qof reer Britain ah ayaa Johnson ku eedeeyay edeb darro wuxuuna yiri “Bal ka warran haddii jaraa’iddada Britain qaar ay arki lahaayeen ra’iisulwasaare marti ah oo sidaas ku sameeyay Buckingham Palace!”
“Waxaa cad in aan habdhaqanka wanaagsan lagu soo barin Eton, ayuu yiri qof kale.
Qof kale oo Faransiiska jooga ayaa isaga oo Faransiis wax ku qoraya wuxuu yiri “Waxaa igu taagan siday tolow arrintan u aragtaa Boqoradda.”
Alastair Campbell oo horay ula soo shaqeeyay Tony Blair ayaan arrintan dhanka dabacsan ka fiirinin.
“Waa waji gabax in ra’iisulwasaaraha dhawaan la doortay ee Boqortooyada Ingiriiska ay wakhti dheer ku qaadato in uu arko hoggaamiyaha Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ka dibna uu lugta saaro miiskii madaxweynaha” wuxuu sidaas u sheegay wakaaladda warar PA.
“Arrintas in aysan muhiim ahayn ayay u muuqataa, balse waa qalafsani iyo xushmad darro.”
Tom Rayner oo ah saxafi arrimaha siyaasadda uga warrama telefeshinka Sky News ayaa soo gudbiyay arrin middaas ka duwan, wuxuuna sheegay in ay arrintaasi ku timid kaftan diiran oo la is waydaarsaday.
“Maya Boris Johnson ma aflagaadayn Faransiiska markii uu lugta saaray miiska horyaalay madaxweyne Emmanuel Macron,” ayuu ahaa ciwaanka wargayska Le Parisien, intaas ka dibna waxay soo dhigeen kaftankii labada masuul dhexmaray”.